Ifunyenwe 25 ~ Mateyu, Marko, Luka, Yohane, Acts, Roma, 1 Korinte, 2 Korinte, Galati, Efese, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timoti, 2 Timoti, Tito, Filemon, Hebhere, Yakobi, 1 Petros, 2 Petros, 1 János, 2 Yohane, 3 Yohane, Yuda, Isityhilelo
Ke kaloku uYesu wakhula, waya esomelela, enobulumko obukhulu, ubabalo lukaThixo lunaye.
Nakuba uThixo wasinika umthetho ngoMosis, ubabalo nenyaniso wasinika ngoYesu Krestu.
Kuni nonke, bathandwa bakaThixo abaseRoma, nina nibiziweyo naba ngabakaThixo, ndithi: Makube lubabalo noxolo oluvela kuThixo uBawo wethu, neNkosi uYesu Krestu.
Ukuba ukufa kwakutshatshele ngenxa yesono saloo mntu, abo balwamkelayo ubabalo oluphuphumayo kwanesipho sokwenziwa amalungisa, baya kudla ubomi ngokugqithisileyo ngaloo mntu mnye unguYesu Krestu.
Síthini na ke ngoko? Síhlale sihleli esonweni ukuze ubabalo lwande?
Ubabalo lweNkosi yethu uYesu Krestu malube nani nonke. *Amen.]
2 Korinte 6:1
Ngoko ke njengabo basebenzisana noThixo siyanibongoza ukuba ningathi kanti ubabalo lukaThixo nilwamkelele ilize.
Kodwa yandiphendula yathi: “Ubabalo lwam lukwanele, kuba amandla am acaca xa ubuthathaka.” Ngoko ke ndikhetha ukuqhayisa ngezinto ezibonakalisa ubuthathaka bam, ukuze ndikuve ukongama kwamandla kaKrestu phezu kwam.
2 Korinte 13:13
Ubabalo lweNkosi uYesu Krestu, nothando lukaThixo, nobudlelane boMoya oyiNgcwele, maluhlale nani nonke.
Ubabalo lweNkosi yethu uYesu Krestu malube nani nonke, mawethu. *Amen.
Lwanga ubabalo lukaThixo lungahlala kubo bonke abayithanda ngothando olungatshitshiyo iNkosi uYesu Krestu.
Ubabalo lweNkosi uYesu Krestu malube nani nonke.
Umbuliso lo ubhalwa ndim mna Pawulos. Khumbulani ukuba ndikhonkxiwe! Ubabalo lukaThixo malube nani.
Kubhala mna Pawulos, ndikunye noSilas noTimoti. Ndibhalela ibandla likaThixo uYise neNkosi uYesu Krestu, eliseTesalonika. Ndithi kuni: Makulawule ubabalo noxolo.
Lwanga ubabalo lweNkosi yethu uYesu Krestu lungahlala nani.
Ubabalo lweNkosi yethu uYesu Krestu malube nani nonke.
Ubabalo lweNkosi uYesu Krestu maluhlale nani nonke.
Lumkani kungabikho mntu uphulukana nalo ubabalo lukaThixo. Makungakhuli ngcambu yabubi inokuthi ibe yityhefu kwabaninzi.
Nize ningakhukuliswa enyanisweni ziimfundiso ezingabhadlanga. Kulungile ukuba somelezwe lubabalo lukaThixo, yaye imithetho ngezinto emazityiwe nemazingatyiwa ayincedi nto, ayizange ibancede nabo bayigcinayo.
Ubabalo lweNkosi uYesu maluhlale kuni nonke.